သုံးစွဲရ လွယ်ကူတယ် စျေးနူန်းလည်းသင့်တင့်တယ် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သင့်အလှတွက် Snail Wish လေးကို သုံးကြည့်သင့်ပါတယ်နော် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်းမျက်နာတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပဲပါဝင်တာမုိ့ ဘယ်အသားရေမဆို အဆင်ပြေပါတယ်နော် တဘူး 29500 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
💕 Day & Night နှစ်မျိုး လိမ်းလို့ရတဲ့ Skin Care ကောင်းကောင်းရှာနေရင် Snail Wish Whitening Creamလေးလိမ်းကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်တယ် ချစ်လေးတို့ရယ်❣❣ အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလို့ ရောင်းအားကောင်းနေတာလေးပါ 🐌 Snail Wish Whitening Creamကို သနပ်ခါး မိတ်ကပ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ တွဲလိမ်းလို့ရသလို snail wish သီးသန့်လဲလိမ်းလို့ရတယ်နော် 👌 ✅ အသားအရေကို ဖြူဖွေးတင်းရင်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး အရေးအကြောင်းကိုတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ရှင့် ✅✅ ✔ Korea FDA / Myanmar FDA approve ရရှိပြီး ပစ္စည်းကောင်းလေးမို့ Sensitive skinက အစ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့် ✔ 🐌🐌Snail Wish Whitening Cream. 29500kyats 💎💎New Skiin. 3500 kyats Crd လက်လီ & လက်ကားမှာယူလိုပါက ♥ cb or 09454549089 ကို hello လုပ်လိုက်နော် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ် m.me/NewSkiinMyamar
😍Skin Care အသစ်သစ်တွေလဲထုတ်သွားဖို့ ရှိပါကြောင်း🙂🙂 Skin Care တွေ ပြောင်းသုံးသင့် မသုံးသင့်။ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Skin Care ဆိုတာ ရှာဖွေရခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Skin Care သုံးနေရင် ပြောင်းသုံးဖို့ လိုအပ်လား မလိုအပ်ဖူးလား။ အမှန်က Skin Care တွေကို ပြောင်းသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ Skin Care အမျိုးအစားတစ်ခုကို ၆ လလောက်သုံးပြီးရင် ပြောင်းသုံးကြည့်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Skin Care တစ်မျိုးက ၆ လလောက်ဆို သင့်အသားအရေနဲ့ အရမ်း အသားကျသွားပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ အသားအရေအတွက် ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းတွေ မပြတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Skin Care တစ်မျိုးသုံးနေရင် အစပိုင်းမှာ ထိရောက်မှုပြပြီး ကြာလာရင် စသုံးသုံးချင်းတုန်းကလို ထိရောက်မှုမသိသာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Skin Care အသစ်သုံးပေးခြင်းက သင့်အရေပြားကို နိုးထလာစေပြီး သိသာတဲ့ ထိရောက်မှုတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ ၆ လတစ်ကြိမ်လောက် အရေပြားကို အသစ်သော အာဟာရဓါတ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ပေးခြင်းက အရေပြားနုပျိုခြင်းကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Focus Beauty မှလည်း Customer များ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်စေဖို့ နောက်ထပ် အရေအသွေးစစ်မှန်တဲ့ Skin Care များကို တင်သွင်းပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ #FocusBeauty #SkinCareTips 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
✨ new skiin 5g ကို သုံးတာ အားမရဘူးဆို 💁‍♀ဗူးကြီး 50g ရှိတယ်နော် creamကို တစ်ချက် ရှိုးလိုက် 👉 for all skin typeနော် 🔥 သုံးတဲ့သူတိုင်းဆီကနော glowလာတယ် အမဲစက်တပျောက်လာတယ် အဆီဖုတေချပ်လာတယ် ဆိုတာတေပဲ ပြန်ကြားရတဲ့ ✨ new skiinနော် new skiin 💸 3500ks (5g) snail wish 💸 29500ks (50g) instock 💃 ချက်ချင်းမှာချက်ချင်းရပါတယ် စောင့်စရာမလိုပါ #crd 09454549089
အထုပ်ဘဲရွေးရွေး💁‍♀️ ဗူးဘဲရွေးရွေး💁‍♀️ သေချာတာတစ်ခုပဲရှိတယ်🙆‍♀️ အဲဒါဘာလဲသိလား? သင်ပိုလှလာမယ်ဆိုတာပါပဲ😍😍😍 ကိုယ်တော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီ 🌸Snail wish&New skinလေးကို🌸 5g အထုပ် - ၃၅၀၀ 50g ဘူး - ၂၉၅၀၀ကျပ် Crd 09454549089
Mirror Mirror on the wall !!! Who's the fairest of them all ? မနှင်းဖြူပုံပြင်ထဲက ‌မှော်မှန်ကြီးကို လူတိုင်းသိကြမှာ‌ပေါ့. အလှပဆုံး အဖြူ၀င်းဆုံး အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်နေဖို့ ‌မှော်မှန်ကြီးကို ‌မေး‌နေစရာမလိုပါဘူး ‌မှော်‌ဆေးလုံး‌လေးဖြစ်တဲ့ New Skiin Skin Reborn Solution တစ်နေ့တစ်လုံး ‌သောက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်‌နော်. တစ်လအတွင်းမှာ လူတိုင်း Snow White ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. NewSkiin Skin Reborn Solution အလုံး ၃၀ ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်. 09454549089 #NewSkiin #SkinRebornSolution
😍 သုံးဖူးသူတိုင်းရဲ့အကြိုက်😘 Hydrolipidic Film လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အဆီလွှာပါးလေးကို အကျိုးပြုစေမဲ့...New Skiin Face Mask လေးနဲ့ Skin Care မယ်...😉😉 Hyaluronic Acid ၆မျိုး.. ,Pearl Extract,Berry၇မျိုးတို့မှ ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်.. သင့်မျက်နှာအသားအရေကို 1.ရေဓါတ် ပြည့်ဝနေစေမယ်..✔️✔️ 2.Collagen နဲ့ Elastin တွေကိုဖျက်ဆီးစေတဲ့.. Free Radicals ရန်မှ ကာကွယ်ပေးတယ်။✔️✔️ 3.မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အရေပြားရဲ့ PH Level ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ကဲ မယုံရင် New Skiin Mask လေးဝယ်ပြီးကပ်ကြည့်တော့... ✌️ ကြည်လင်စိုပြေသော အသားအရေရဖို့ တာဝန်အပြည့်ယူပေးထားပါတယ်.. 👏👏👏 5ချပ်တဘူး-၁၅၀၀၀ ကျပ်။ 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
အသားဖြူချင်လား နွားနို့နဲ့နေ့တိုင်းရေချိုးစရာမလိုပါဘူး Snail wishလေးသာလိမ်းနော် အသားဖြူတဲ့အပြင်အသားရေလေးကြည်ပီးအမဲစက်ကင်း glow nationလေးပါပိုင်ဆိုင်ရမယ် #HN 09454549089
🍋Garnier Light Complete Vitamin C Super Essence🍋 🍋တင်းတိပ် အမည်းစက်များ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းလိုသူ၊ အသား အရောင် မညီညာမှုများကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် အထိရောက် ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Super Essence ဖြစ်သည်. Vitamin C အဆ ၃၀ ပိုမိုပါ၀င်ပြီး Japanese Yuzu Lemon ကို အခြေခံထုတ်လုပ် ထားတာ ကြောင့် သင့်အသားအရေကို အမြန်ဆုံး ဖြူ၀င်းလာစေပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ် များကိုလည်း လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်. 🍋အသားအရေအတွင်း လျင်မြန်စွာ စိမ့်၀င်နိုင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းလုံး၀မရှိပါ. အသားအရေမည်းညစ်ခြင်းကို ၇ ရက်အတွင်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာလာစေသည်. (နေလောင်ခံတစ်ခုခုဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါက ပိုမို ထိရောက်သည်). စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအရ အမည်းစက်များကို ၄ ပတ် အတွင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှေးမှိန်သွားစေသည်. 🍋အရေပြား စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အသား အရေ အမျိုးအစားအားလုံး သုံးစွဲနိုင်ပါသည်. 30ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်. #GarnierVitCSuperEssence #crd #SVGonlineshoppingandbusiness
ကျန်းမာ‌ရေးအတွက် လက်နဲ့ မျက်နှာမသစ်နဲ့တော့နော်. Nano Brush ‌လေးကိုသုံး . . .
First Page « 170 171 172 » Last Page